Perfect Blue – MMANIME
Perfect Blue 08/20/1999
R-rated 1h 21mins Animation, Thriller
Emi Shinohara, Hideyuki Hori, Junko Iwao, Kiyoyuki Yanada, Masaaki Ōkura, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji, Tōru Furusawa, Yoku Shioya, Yōsuke Akimoto
Death note, one punch man, no game no life, HxH, overload အစရှိတဲ့ကားကောင်းတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ studio Madhouse ရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုပါ IMdb မှာ rating 8/10 နဲ့ MAL မှာ 8.4/10 အထိတောင်ရရှိထားတဲ့ raiting ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကားလေးပါ 1998 က anime ဆိုပေမယ့် old but gold ပါ
ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အတိတ် လက်ရှိနဲ့အိပ်မက် အစစ်အမှန်နဲ့ပုံရိပ်ယောင်ဆိုတာတွေက တကယ်တမ်းရောထွေးသွားရင် ပြန်ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်ကူပါဘူး….
ဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကြီးပေါ့ပ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kirigoe Mima ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Cham ကနေထွက်ပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်လှမ်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အစွဲအလမ်းကြီးမှုကြောင့် ကံတရားအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့အစွဲအလမ်းကြီးမှုက သူ့ဘဝကြီးကိုအမှောင်ထုတွေ ပုံရိပ်ယောင်တွေ ခြောက်ခြားစရာတွေဖုံးလွှမ်းသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ ဒီလူကသူမကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အကြမ်းဖက်စာတွေအပြင် website တစ်ခုကနေလဲသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ထားသလိုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေတွေ့လာရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမဟာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတို့ရဲ့အထဲမှာပိတ်မိလို့လာပါတော့တယ်။ လူသတ်မှုတွေ တခြားသူမနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့် သူမရဲ့စိတ်အခြေအနေကလည်းကယောက်ကယက်တွေဖြစ်ပြီး အဖက်ဆယ်မရအောင်စိတ်ဓာတ်ကကျသထက်ကျလာတယ်။ အဆုံးမှာသူ့ကိုဒီပြဿနာတွေကြားမှာနစ်မွန်းစေတဲ့ အဓိကတရားခံကိုပဲသူရှာတွေ့နိုင်မလား။ သူမကိုယ်တိုင်ကပဲဒီပြဿနာတွေ အမိုက်မှောင်တွေရဲ့ သားကောင်တစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားမလားဆိုတာကို သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရှုရမှာပါ။
Emi Shinohara Hideyuki Hori Junko Iwao Kiyoyuki Yanada Masaaki Ōkura Rica Matsumoto Shinpachi Tsuji Tōru Furusawa Yoku Shioya Yōsuke Akimoto
Akio Suyama Aya Hara Emi Motoi Emi Shinohara Emiko Furukawa Hideyuki Hori Junko Iwao Kishō Taniyama Kiyoyuki Yanada Kōichi Tōchika Makoto Kitano Masaaki Ōkura Masashi Ebara Megumi Tano Osamu Hosoi Rica Matsumoto Rofuto Purasu Wan Burazâzu Shiho Niiyama Shin-ichiro Miki Shinpachi Tsuji Shokkâ Ôno Soichiro Hoshi Tōru Furusawa Yoku Shioya Yōsuke Akimoto
Option 1 mediafire 760mb 1080p
Option2mediafire 510mb 720p
henodel fe98829e30 https://coub.com/stories/2950516-batman-begins-tamil-dubbed-free-download-torrent-full-install
gladstar fe98829e30 https://wakelet.com/wake/LUBMP8RNN4r-ivL17xgH5
oceagarm fe98829e30 https://coub.com/stories/2965966-izahli-mentiq-testleri-pdf-download-new-savas-vierenschutz-p
egetad fe98829e30 https://wakelet.com/wake/WixpTGIKVHs7bQeS2xLXJ
glebeth fe98829e30 https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_093SCQwLEgZDb3Vyc2UYgICAn6TaxAgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkOqm3QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
zaviual fe98829e30 https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCg-I6iCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwIyEnQkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkIrc4AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
chawad fe98829e30 https://coub.com/stories/2952875-download-after-effects-plugins-cc-pixel-polly-kamdis
lesesiri fe98829e30 https://wakelet.com/wake/n0KqzwcxzaiijPHAcKvkO
jemygerm 7383628160 https://coub.com/stories/2972188-v-ray-license-4-10-01-crack-full-3ds-max-next-full-download-landvig
meloaba 7383628160 https://wakelet.com/wake/NynAqStEkDSQVRTwF148Y
elmipied 79a0ff67a5 https://coub.com/stories/2709824-link-easycap-usb-2-0-software-download-mac
wenance 79a0ff67a5 https://coub.com/stories/2685492-difference-between-inflectional-and-derivational-morphology-with-examples-pdf-extra-quality
ziloama b9c45beda1 https://coub.com/stories/2692531-libro-historia-2-secundaria-santillana-install
jaralp b9c45beda1 https://coub.com/stories/2711417-latest-acog-guidelines-for-vbac
330924 437095You genuinely should experienceatournament for starters with the finest blogs online. Let me recommend this excellent web site! 949872